rad-vid-covid-19-somaliska - 1177 Vårdguiden
Råd till dig som har covid-19 - somaliska
Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19
Talada la siinaayo qofka covid-19 qaba
Waxa halkan ku yaala talo la siinaayo qofka cudurka covid-19 qaba. Waxay taladu khuseysaa qofka guriga joogi kara ee aan u baahnayn in cisbitaal daryeel lagu siiyo. La xiriir daryeelka caafimaadka haddii aad ka sii xanuunsatid sida aad tahay.
Qoraalkan dib ayaa loo cusbooneysiin doonaa.
Halkan ayaad ka akhrisan kartaa wixii dheeraad ah oo covid-19 ku saabsan
Iska qaadista tijaabo/Iska baadhista haddii aad aamminsan tahay inaad covid-19 qabtid. Tijaabada iyo shaybaarku waa isku mid.
Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad uga hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa halkaad joogto khuseeya.
Du kan läsa texten på svenska här.
Wax badan cab
Waxa muhiim ah in wax badan la cabo, gaar ahaan haddii aad xumad ama qufac leedahay. Waxa wanaagsanaan karta in waxoogaa biyo kulul ama biyo qabow aad cabto haddii uu cunahu ku xanuunaayo.
Cab tusaale ahaan biyo, shaah, maraq la fadhiisiyey ama maraq caadi ah.
Waxaad sidoo kale cuni kartaa jalaato, iskiriin ama caano fadhi.
Madaxa hoos dhig barkin dheeraad ah
Waxa wanaagsan inaad madaxa kor u soo qaado.
Waxay taasi kaa caawineysaa haddii aad wax badan qufacayso.
Madaxa barkin dheeraad ah hoos dhig markaad hurudo.
Qolka qabow ka dhigo
Waxa fiicnaan karta in markaad seexaneyso qolku waxoogaa yara qaboobaado.
Waxaad tusaale ahaan naaqusi kartaa kuleyliyaha (hiiterka) ama daaqadda ayaad furi kartaa.
Isku dey inaad dhaqdhaqaaq sameyso
Waxaad u baahan tahay inaad nasato markaad jiran tahay. Laakiin ma fiicna wakhti badan in aanad dhaqdhaqaaqin/aad iska jiifto.
Waxa ka sii fiican haddii aad isku daydo inaad dhaqdhaqaaq samayso.
Kuwani waa waxyaabo aad tusaale ahaan isku dayi karto inaad sameyso:
Lugaha iyo cagaha dhaqdhaqaaji.
Mararka qaarkood dhinaca aad u jiifto bedel.
Mararka qaarkood fadhiiso ama kor u istaag.
Markaad roonaato ayaad isku dayi kartaa inaad banaanka aado/u baxdo oo aad dhaqdhaqaaq sameyso. Ha sameynin wax ka badan waxaad awoodi karto.
Waxaad isticmaali kartaa dawooyinka aan warqadda dhakhtarka u baahneyn
Waxaad isticmaali kartaa dawo paracetamol ku jirto haddii qandho/xumad badan aad leedahay. Dawadu waa mid aan warqadda dhakhtarku kuu qoro u baahneyn.
Carruurta lix bilood ka weyn ayaa dawada paracetamol ku jirto isticmaali karta. Haddii ilmahu uu lix bilood ka yar yahay ayaad marka hore dhakhtarka waydiinaysaa.
Qofka uu cunahu xanuunaayo ayaa kiniinka cunaha isticmaali kara.
Waxaad isticmaali kartaa dawada sanka la iskaga buufiyo
Waxaad isticmaali kartaa dhibcaha sanka ama dawada sanka la iskaga buufiyo. Waxa jirta dawada dhibcaha sanka ama dawada sanka la iskaga buufiyo oo aan warqadda dhakhtarka u baahneyn oo ay cusbo ku jirto.
Waxa sidoo kale jirta dawada dhibcaha sanka ama dawada sanka la iskaga buufiyo oo aan warqadda dhakhtarka u baahneyn taas oo bararka sanka yaraysa. Dawada dhibcaha sanka ama dawada sanka la iskaga buufiyo waxaad ugu badnaan isticmaalaysaa toban maalmood.
Iska ilaali cabitaanka sigaarka
Iskuday inaanad sigaar cabbin iyo inaanad joogin halka ay dadka kale sigaar ku cabayaan. Qufaca waxa uu kaaga sii darayaa qiiqa.
Qofka u baahan inuu guriga joogo
Cidla ayaa la dareemi karaa in guriga la joogo. Dad badan ayaa u arka inay wax adag tahay inaan lala kulmin dadkaad badanaa la kulmi jirtay.
Isku day inaad xidhiidh la samayso saaxiibadaa iyo qoyskaaga tusaale ahaa waad isa soo wici kartan.
Waxa wanaagsan in sida caadiga ah wakhti isla mid ah wax la sameeyo. Waxaad tusaale ahaan kici kartaa oo aad quraacaan kartaa isla xilligaad sidaas sameyn jirtey.
Qofka taageero u baahan
Wac lambarka 1177 haddii aad rabto in lagaa caawiyo waxaad sameynayso/sidaad yeeli lahayd. Cidda ka jawaabeysaa waa kalkaalisooyin. Waxay sidoo kale adiga kaa caawin karaan halka aad daryeel ka raadsaneyso, haddii aad ka sii xanuunsato.
Waxay kalkaalisadu ku hadashaa af Iswidhish iyo Ingiriisi.
Wac +46 771-11 77 00 haddii aad telefoon lambar wadanka dibadiisa ah kasoo hadlayso.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan covid-19
Wac telefoonka 08-123 680 00 haddii su'aalo covid-19 ku saabsan aad qabtid oo la hadal qof af Soomaali ku hadla . Khadka taleefanku waxa uu furan yahay Isniinta ilaa Jimcaha 9.00 -15.00.
Wax dheeraad ah oo covid-19 ku saabsan ku sii akhriso af Soomaali
Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19 - 1177.se
Warbixin ku saabsan cudurka [Covid-19] - Folkhälsomyndigheten
COVID Certificate: For travelling and attending events (in English)
COVID Certificate (ehalsomyndigheten.se)
Lars Ljungström, Dhakhtarka, khabiirka cudurada faafa, Skövde